Somalia: War Dheeraad ah: Wasiirka Howllaha guud oo lagu toogtay nawaaxiga Madaxtooyada - Wargane News
Home Somali News Somalia: War Dheeraad ah: Wasiirka Howllaha guud oo lagu toogtay nawaaxiga Madaxtooyada
Somalia: War Dheeraad ah: Wasiirka Howllaha guud oo lagu toogtay nawaaxiga Madaxtooyada
Ciidan la socday Hanti-dhowrka Guud ee dalka Nuur Farax, ayaa caawa toogtay wasiirka howllaha guud iyo dib-u-dhiska dalka Soomaaliya Cabas Cabdullahi Siraaji.
Ilaa iyo hadda ma cadda sababta ka dambeysay dilka wasiirka.
Sidoo kale wasiir la socday wasiirka geeryooday, ayaa la sheegay in uu ka badbaaday rasaasta lagu furay gaarigii ay la socdeen.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku xaqiijiyey geerida.
Marxuum Cabaas, oo 31-jir ahaa ayaa waxaa uu wax ku bartay kuna bar-baaray xeradda Dhadhaab ee dalka Kenya, ka hor inta siyaasada uusan kusoo biirin.
Ciidanka dowladda ayaa hadda wada baaritaano xooggan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay si rasmi ah war faah faahsan uga soo saarto dilka Wasiirka iyo sida uu u dhacay.
Somaliland: Ninka Diida Casriyaynta Dekedda Berbera Waa Nin Aan Ahayn Somalilander Oo Xamar Taageersan Baarlamanow Diyaar Garwo Way,,,,,Cali Shoombe